Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa neChipiri vakazivisa kuti vakange vave kusiira zororo ravo panzira vachidzokera kubasa kuti vabatsire mutevedzeri wavo VaConstantino Chivenga panyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba.
Hurumende yakanga yapa VaChiwenga basa rekuti vagadzirise makakatanwa ari pakati peboka rezvehutano, reHealth Services Board navanachiremba vari kuramwa mabasa.
Asi mukuratidza kuti zvinhu zvakanga zvisiri kufamba sezvaitarisirwa munhaurirano idzi, Health Services Board yakatomisa vanachiremba ava mabasa, ukuwo vamwe vashandi vari pakuramwa mabasa vachinyimwa mihoro yavo yemuna Zvita 2018.
Vanachiremba neChipiri vakapinda mumazuva makumi matatu nemaviri vachiramwa mabasa vachida kuti hurumende igadzirise zvinhu muzvipatara pamwe nemihoro yavo.
Nyanzvi mune zvehutano uye vari nhengo yeZanu PF mumuAmerica, Doctor Frenk Guni, vanoti vanoona sekunge danho rakatorwa naVaMnangagwa iri rakakosha mukugadzirisa makakatanwa aya kuti zvinhu zvidzoke pakugadzikana mune zvehutano.
Asi vamwe vanoona nezvematongerwo enyika vanoti zvaita izvi zvinoratidza kuti VaMnangagwa vakanga vasisina chivimbo naVaChiwenga chekuti vangagadzirisa zvinhu.